Vondrona eorôpeana : 490 tapitrisa eorô enti-manampy ny fanjakana
Miara-dalana amin'i Madagasikara amin'ny fanatanterahana ireo fandaharan'asa voafaritra anatin'ny politika ankapoben'ny fanjakana araka ireo velirano nataon'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ny Vondrona eorôpeana. Nivoitra tamin'ny fifanakalozan-kevitra politika nifanaovan'i Madagasikara sy ity vondrona ity ny 2 Mey fa avy amin'ireo tetik'asa IEM no hamoahan'ireo mpiara-miombon'antoka ny famatsiambola hanampiana ny firenena ankehitriny.
Nametraka fomba fiaraha-miasa vaovao mantsy ny fihaoanana, nahafahan'i Madagasikara nametraka ireo fandaharan'asany ka avy amin'ireo no hivoahan'ny famatsiam-bola. Fiovana goavana satria tsy ny mpamatsy vola intsony no mametraka ireo fandaharan'asa noho izany.
360 tapitrisa eorô ho an’ny RN 6 sy RN 13
Arak’izany, vola manodidina ny 490 tapitrisa eorô no efa neken'ny Vondrona eoropeana sy navoaka ho fanampiana an'i Madagasikara. Isan'ny noresahana tamin’ity fifanakalozan-kevitra politika andiany fahafito ity koa ny hamatsiambola ny fanamboarana ny lalam-pirenena fahaenina sy fahatelo ambiny folo (RN6 sy RN 13) izay mitentina 360 tapitrisa eorô.
Mpiara-miasa efa aman-taonany maro ny Vondrona eoropeana sy i Madagasikara, ary samy vao mainka maneho ny fahavononany hiara-dia hampandroso an'i Madagasikara ankehitriny. Hoy ny Filoha Andry Rajoelina raha nandray fitenenana : « Mba hanomezana endrika vaovao an'i Madagasikara, andeha isika hiaraka hanoritra ho avy tsaratsara kokoa ho an'ny vahoaka Malagasy ». Fangatahana izay neken’ireo vahiny izay namafisan’ny masoivohon’ny Vondrona eorôpeana izay nanambara fa « naneho ny fiaraha-miasa matotra eo amin'i Madagasikara sy ny Vondrona eorôpeana ity fifanakalozan-kevitra politika fahafito ity.
Atoa Giovanni Di Girolamo, masoivohon’ny Vondrona eorôpeana no nitarika ny delegasiona vahiny izay nahitana ireo masoivoho maro toy ny an’ny Lafrantsa, Alemana ary koa ireo nisolo tena ny fanjakana espaniôla sy belza. Ny fitondrana Malgasy kosa notarihin'ny Filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina, notronin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy minisitra 13.